'चराहरुले डा.केसीको ओछ्यानमै दिसा गर्छन्' - ब्लग - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
किशोर केसी जुम्ला असार १८
डाक्टर गोविन्द केसी अनशन बसेको हलको अवस्था राम्रो छैन। हलमा बस्ने चराहरुले उहाँ सुतेको ओछ्यानमै दिसा गर्छन्। हल अँध्यारो र चिसो भएकाले डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ। चिसो र निरन्तरको वर्षाले उहाँको स्वास्थ्यमा सोझै असर पारेको छ।
चिसोका कारण इन्फेक्सन हुने डर छ। अव्यवस्थित ठाउँमा मेडिकल टिमले तत्काल केही गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन। शनिबार अनसन बस्न लागेका बेला प्रहरीको अवरोध खेपेका उनी हाल प्रहरीको कडा निगरानीमा छन्। टाउको दुख्ने, छाती पोल्ने, जिउ दुख्ने समस्याले उहाँलार्इ सताइरहेको छ। डा केसीले मलार्इ भनेअनुसार उहाँका हातखुट्टा बाउँडिएका छन्, मुटुको धड्कन बढेको छ।
दुर्इदिन देखि पानी नखाएका कारण पिसाब कम भएको छ। त्यसको असर मृगौलामा देखिइरहेको छ।
त्यो दिन प्रहरीले डा. केसीलार्इ एउटा हलमा लगेर छोडिदियो, शनिबार अनशन सुरु भएको घोषणा हुनुअघिको कुरा हो यो। डा.केसीलार्इ हिरासतमा लिएका कारण स्थानीयले प्रहरी प्रशासनको विरोध गरेपछि उहाँलार्इ जिल्ला खेलकुद समितिको हलमा लगेर छोडेको हो।
हल पुगेको केही समयमै डा.केसीले अनशनको घोषणा गर्नुभयो। काठमाडौंबाट जुम्लासम्मको यात्रा र जुम्लामा अनशन बस्नकै लागि उहाँले गर्नुपरेको संघर्षको साक्षी म पनि छु। किनकी म पनि उहाँको सहयोगीको रुपमा जुम्ला आएको छु। पछि के होला थाहा छैन। तर, डा. केसीले जुम्लामा अनशन घोषणा गर्नुभन्दा पहिले धेरै संघर्ष गर्नुपरेको मैले प्रत्यक्ष देखेको छु। लोकतान्त्रिक देशमा यस्तो नहुनुपर्ने हो।
प्रहरीले उक्त समितिको हलमा डा.केसीलार्इ छोडिदिएपछि अनशन घोषणा भयो। शनिबारको त्यो रात पानी पर्‍यो, पानी परेकाले त्यो रात निकै चिसो भयो। अनशनस्थल अर्थात् उक्त हलमा बत्ति पनि थिएन, मैले क्यान्डिल ल्याएर बालेको थिएँ। अनशन सुरु गर्नुभन्दा पहिले प्रहरीले डा केसीलार्इ आफ्नो नियन्त्रणमा राख्यो। पछि, आफै पन्छियो।
अहिले डा.केसीले आफु हिरासतमै रहेको बताउँदै आउनु भएको छ। तर, प्रहरीले उक्त कुरालार्इ स्वीकार गरेको छैन। अनशनस्थल राम्रो छैन, चिसो छ त्यसैकारण उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै गइरहेको छ।
डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गइरहेको भन्दै चिकित्सकहरुले तत्कालै काठमाडौं लैजान सुझाब दिएका छन्। पटक–पटकको अनसन र जुम्लाको मौसमका कारण डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था यसपटक अनसनको दोस्रो दिनबाटै जटिल बनेको छ।
डा केसीको अवस्था जटिल बनेपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुले सम्पूर्ण मेडिकल सुविधा भएको ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न अनुरोध गरेका छन्। हाल अनसन बसिरहेको स्थानमा बिद्युत लगायतका सुविधा अभावका कारण सामान्य मोनिटरिङ पनि गर्ने व्यवस्था नभएकाले डा केसीको उपचारमा समस्या पर्ने भन्दै स्थानान्तरण गर्न भनिएको हो।
डा केसीको उपचारमा खटिएका तीनजना टोलीले डा केसीको स्वास्थ्य बिग्रिएको भन्दै प्रतिष्ठानमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो। टोलीले दिएको सुझाबका आधारमा प्रतिष्ठानले तत्कालै मेडिकल सुविधा भएको ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न पहल गरिदिन अनुरोध सहितको पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा पठाएको छ।
अनसनको तेस्रो दिनमा डा केसीको अवस्था निकै नाजुक भएपछि अकस्मिक उपचार टोली बिहान ३ बजे अनसनस्थल पुगेको थियो। डा केसीको छातीमा असह्य पीडा भएपछि डा गिरीलार्इ फोन गरेर बोलाइएको थियो। त्यसपश्चात गरिएको जाँचका क्रममा डा केसीको मुटुको चालमा गडबढी रहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन्।
(किशोर केसी डा. गोविन्द केसीका भार्इ हुन्)
प्रकाशित १८ असार २०७५, सोमबार | 2018-07-02 19:56:00
किशोर केसीबाट थप